Kiiska ugufiican BOOX Nova3 midab Nova 3 Nova 2 7.8 inch oo leh suumanka gacanta ku haysta qalin saaraha iyo Warshad | Socodka
Kiiska BOOX Nova3 midab Nova 3 Nova 2 7.8 inch oo leh qalin qalin gacanta ku haysta
Kiiska taagan maqaar Functional
Kiiskani wuxuu isku daraa suunka gacanta, qalin qori iyo laad taagan. Waawuxuu dhagahaaga ku hayaa istaag Xoree gacantaada markaad wax aqrinaysid, sidoo kale cabgalaya kafee. Qalin-hayaha ayaa haya qalinkaaga markii aadan isticmaalin.
Naqshadeynta suunka gacanta
With suunka gacanta / gacan hayaha, waxay kuu ogolaaneysaa inaad akhristaha ku haysato hal gacan.Bandhigga laastikada ayaa raaxo leh oo ku habboon adiga iyo gacmaha kale.
Gacantaada sii daa .Waad laad laad laad ku dhufaneysaa, akhristaha ayaa si adag u dul istaagaya miiska, meel kasta oo gurigaaga ah, maktabadda, makhaayadda ama banaanka. Waxaad ku raaxeysan laheyd akhriska iyo waliba qaxwada iyo cabitaanka.
Qalin qalin lagu dhejiyay
Qalinkaaga lidka ku ah Waxay ku dareysaa qalin-hayaha dhinaca. Qalinkaaga waad ku ridi kartaa, don’ha ka welwelin inaad lumiso.
Si toos ah u seexo oo soo toos
Ku raaxayso akhriskaaga oo aan dhammaad lahayn. Kiiskan maqaarku wuxuu taageeraa hurdada baabuurta iyo soo kicinta shaqada. Markaad bixi doontid ama aad seexan doontid, dabool daboolka si aad u dhammaysato akhriskaaga. Markaad rabto inaad wax akhrido, iska fur oo bilaw akhriska.
Dareen taabasho wanaagsan
Qalabka maqaarka ee sarreeya wuxuu leeyahay dareen taabasho raaxo leh. Isidoo kale waxay ilaalin kartaa akhristahaaga waqti dheer. Microfiber jilicsan gudaha waa non-xoqin, taas oo u dhiganta midabka madow.
Si buuxda u duub dhinaca akhristaha. Ka dhig akhristahaaga mid aamin ah marka la soo bixinayo inta lagu jiro xagashada maalin kasta, dhibic yar iyo kuus kuus ah
La dhisay magnet awood leh ayaa hubisa in kiiskaagu xirmayo. Don’ walwal, akhristahaaga kuma xoqna furayaasha iyo shay kale oo fiiqan marka ay tahay boorsadaada iyo shandadaada.
Dhererka x Width x Qoto dheer: 200 mm x 170 mm x 50mm
MOQ: 100PCS / color Size: 7.8 ”
Shahaadada: FCC, ROHS, CE, GS, RECH, Sgs Feature: xoqista xoqida, shoogga,
Xirxirida: Sanduuqa waraaqda, boorsada opp Nashqadeynta: suunka gacanta, laad istaagga, iyo qalin qori
Lacag-bixinta: 1.T / T 2.Warqad-galbeed 3. Paypal Logo: Daabacan / Aqbal aqbali
Waqtiga bixinta: 3-5 maalmood oo shaqo OEM / ODM Naqshad: aqbal naqshad qaabaysan
MUUQAALKA LA HELI KARO
7.8 inch BOOX nova3 midab, BOOX nova 3, BOOX nova 2.
Hore: Fureyaasha wareega kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'ipad' ee loo yaqaan 'Samsung Lenovo Huawei tablet with touchpad'
Xiga: Kiiska kumbuyuutarka taabashada ee iPadpad 10.2 2020 2019 ipad 8 ipad 7
U istaag kiiska maqaarka ee warqad shidan 4 10th 10 ...